Otú Jehova Si Gọzie Anyị ‘n’Oge Dị Mma na n’Oge Nsogbu.’​—⁠2 Tim. 4:2 | Mba Jọjia: 1998-⁠2006
Ihe a bụ mgbe a na-enwe ụlọ akwụkwọ ndị ọsụ ụzọ n’ebe dị nso na Zugdidi
MALITE n’ihe dị ka afọ 1998 gawa, ọtụtụ ndị batara n’ọgbakọ na Jọjia, e nwekwara ọtụtụ ndị a na-amụrụ Baịbụl. N’afọ 1998, ihe dị ka puku iri atọ na abụọ, narị anọ na itoolu bịara Ncheta Ọnwụ Jizọs.
Ma ọtụtụ ndị okenye na ndị nkwusa ka batara ọhụrụ n’ọgbakọ, ha amachaghị nke a na-akọ n’ọgbakọ. N’ihi ya, e kwesịrị ịkụziri ha otú e si ezi ozi ọma nke ọma na otú e si arụ ọrụ dị iche iche e nwere n’ọgbakọ. Ma, olee otú a ga-esi akụziri ha ihe ndị a?
Nzukọ Jehova Nyeere Ụmụnna Anyị Aka
N’ọnwa Mach afọ 1998, e zigara Nwanna Arno Tüngler na Sonja nwunye ya na Jọjia. Ha gụrụ akwụkwọ na Ngalaba Ụlọ Akwụkwọ Gilead e nwere na Jamanị. N’afọ ahụ, Òtù Na-achị Isi kwadoro ka e nwee obere alaka ụlọ ọrụ na Jọjia. Ọ bụ alaka ụlọ ọrụ anyị dị na Rọshịa ga na-elekọta ya.
Obere oge a malitere obere alaka ụlọ ọrụ ahụ, Kọmitii Na-elekọta Mba malitere ilekọta ozi ọma a na-ekwusa na Jọjia. Ozugbo e debachara aha anyị n’akwụkwọ gọọmenti, a malitere isi n’alaka ụlọ ọrụ anyị dị na Jamanị na-ebubata akwụkwọ anyị. O mekwara ka ọ dịrị anyị mfe ịna-azụta ala ndị a ga-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze nakwa alaka ụlọ ọrụ na ha.
A Malitere Ịkụziri Ụmụnna Otú E Si Eme Ihe n’Ọgbakọ
N’afọ niile ahụ ndị Soviet na-achị Jọjia, ọtụtụ ụmụnna anyị anaghị ezi ozi ọma n’ụlọ n’ụlọ n’ihi na ndị ọchịchị sịrị anyị ekwusakwala ozi ọma. Nwanna Arno Tüngler chetara ihe mere mgbe ahụ. O kwuru, sị: “Ọtụtụ ụmụnna anyị na-ezi ozi ọma karịchaa n’okporo ámá, ma ụfọdụ n’ime ha amachaghị otú e si ezi ozi ọma n’ụlọ n’ụlọ na otú e si eme nletaghachi.”
Nwanna Arno Tüngler na Sonja nwunye ya
N’ọnwa Mee afọ 1999, Nwanna Davit Devidze, malitere ije ozi n’obere alaka ụlọ ọrụ ahụ e hiwere ọhụrụ. Nwanna Davit kwuru, sị: “E nwere ọtụtụ ọrụ a ga-arụ n’èzí nakwa na Betel. E nwere ọtụtụ ihe anyị gụrụla n’akwụkwọ anyị ma anyị amaghị otú e si eme ha. Ma mgbe Òtù Na-achị Isi zitere ụmụnna anyị ma otú esi eme ihe ndị ahụ, anyị si n’aka ha mụta otú e si eme ha.”
Ụmụnna ndị ahụ Òtù Na-achị Isi zitere malitere ịkụziri ụmụnna nọ na Jọjia ọtụtụ ihe. Ọzụzụ a baara ma ụmụnna ndị ahụ si esi bịa ma ụmụnna Jọjia uru otú ahụ ịga ozi ọma n’ebe a chọkwuru ndị nkwusa na-abara ma ndị gara ya ma ndị nọ n’ọgbakọ ebe ahụ uru. (Ilu 27:17) N’eziokwu, ụmụnna ndị ahụ mụtara ọtụtụ ihe n’aka ụmụnna nọ na Jọjia.
Ụmụnna Ndị Jọjia Hụrụ Ibe Ha n’Anya
Nwanna Arno na Sonja nwunye ya anaghị echefu otú ụmụnna si nabata ha nke ọma mgbe ha rutere Jọjia echefu. Ụmụnna mere ka ahụ́ ruo ha ala ha enwee ike ịrụ ọrụ ha nke ọma.
Nwanna Nwaanyị Sonja ka na-echeta aka ụmụnna nyeere ha. Ọ sịrị: “Otu di na nwunye bi anyị nso na-ebutere anyị nri dị ezigbo ụtọ. Otu nwanna nwaanyị kpọkwa anyị gaa ozi ọma ma kọọrọ anyị banyere ọgbakọ ọhụrụ anyị na-aga ịnọ na ya. Ọ kọkwaara anyị ọtụtụ ihe banyere omenala ndị Jọjia. Nwanna nwaanyị ọzọ medara obi kụziere anyị asụsụ Jọjin.”
Nwanna Warren Shewfelt na Leslie nwunye ya e si na Kanada ziga na Jọjia n’afọ 1999 kwuru, sị: “Otú ụmụnna anyị nọ na Jọjia si hụ ibe ha n’anya masịrị anyị, gbaa anyị ume, ma mee ka anyị chọwa otú anyị ga-esi na-eme ka ha. Ha niile na-esi n’ala ala obi ha agwa ibe ha otú obi dị ha, na-emekwa ihe ndị gosiri na ha hụrụ ibe ha n’anya.”
Ndị a bụ ụmụnna ndị Jọjia na ụmụnna ndị si esi bịa. Ha niile jere ozi n’alaka ụlọ ọrụ anyị di na Jọjia
Ụmụnna ndị e si mba ọzọ zite na Jọjia ekweghị ka nsogbu ndị ha na-enwe na-echu ha ụra, kama ha lekwasịrị anya n’àgwà ọma ụmụnna na ndị obodo na-akpa. Otú ụmụnna ndị ahụ si mba ọzọ si dịrị umeala n’obi na otú ha si eme ihe mere ka ụmụnna ndị Jọjia hụ ha n’anya.
Ọtụtụ Ndị Na-atụ Egwu Chineke Abata n’Ọgbakọ
N’agbata afọ 1991 na afọ 1999, ọtụtụ ndị chọrọ ife Chineke nọgidere na-abata n’ọgbakọ. N’afọ 1998 naanị, e mere otu puku mmadụ, narị mmadụ asaa na iri abụọ na anọ baptizim. Olee ihe mere ọtụtụ ndị Jọjia ji chọọ ịmụta eziokwu banyere Chineke?
Nwanna Tamazi Biblaia, bụ́ onye nlekọta sekit ruo ọtụtụ afọ kwuru ihe kpatara ya. Ọ sịrị: “Otu n’ime ihe ndị Jọjia na-esi na nwata kụziwere ụmụ ha bụ ịhụ Chineke n’anya. N’ihi ya, mgbe ọ bụla anyị ziri ha ozi ọma, ọ na-adịrị ha mfe ikwere.”
Nwanna Davit Samkharadze, bụ́ onye na-akụzi ihe n’Ụlọ Akwụkwọ Maka Ndị Na-ekwusa Ozi Ọma Alaeze kwuru, sị: “E nwee onye anyị na ya malitere ịmụ Baịbụl, ndị ezinụlọ ya na ndị agbata obi ya na-enyekarị ya nsogbu. Ma mgbe ụfọdụ, ka ndị a na-agba mbọ ka ha kwụsị onye ahụ ịmụ Baịbụl, ọtụtụ n’ime ha na-amalitekwa ịmụ Baịbụl.”
Ka ụmụnna anyị na-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke ọtụtụ ebe na Jọjia, ọtụtụ ndị gbanwere otú ha si ebi ndụ. Dị ka ihe atụ, n’ọnwa Eprel afọ 1999, puku mmadụ iri atọ na isii, narị isii na iri isii na itoolu bịara Ncheta Ọnwụ Jizọs. Ihe a bụ ọnụ ọgụgụ kacha elu e nwetụrụla tupu mgbe ahụ.
“E Nwere Ọtụtụ Ndị Mmegide”
Pọl onyeozi kwuru banyere ozi ọma o kwusara n’Efesọs, sị: “E megheworo m ọnụ ụzọ buru ibu nke na-eduga n’ịrụ ọrụ, ma e nwere ọtụtụ ndị mmegide.” (1 Kọr. 16:⁠9) Ihe a o kwuru mere ụmụnna anyị nọ na Jọjia ọnwa ole na ole e mechara Ncheta Ọnwụ Jizọs ahụ e mere n’afọ 1999.
N’ọnwa Ọgọst afọ 1999, otu ụkọchukwu ndị chọọchị ya chụrụ achụ kpọ ndị Chọọchị Ọtọdọks okpukpe ha na-agba ara mee ngarị iwe na Tibilisi ma gbaa akwụkwọ anyị ọkụ n’ihu ọha. Aha ụkọchukwu a bụ Vasili Mkalavishvili. Ọ bụ otú a ka ọnụ e mekpọrọ Ndịàmà Jehova ruo afọ anọ si malite.
Malite n’afọ 1999, ọtụtụ ndị na-achọghị iji anya ahụ Ndịàmà Jehova meere ha ngarị iwe, kpọọ akwụkwọ ha ọkụ, ma kụọ ha ihe
N’abalị iri na asaa n’ọnwa Ọktoba afọ 1999, mmadụ ole na ole okpukpe ha na-agba ara kpọkọtara ihe dị ka narị mmadụ abụọ gaa kwụsị ọmụmụ ihe ọgbakọ Glidani, nke dị na Tibilisi nọ na-enwe. Ha ji osisi na ígwè tie ụmụnna anyị ezigbo ihe, nke mere ka e buga ọtụtụ n’ime ha ụlọ ọgwụ.
Ọ dị mwute na e nweghị ihe e mere ndị kpara arụ a, a kwụsịghịkwanụ imekpọ ụmụnna anyị ọnụ. Ọtụtụ ndị ọnụ na-eru n’okwu na gọọmenti nakwa onyeisi ala mba Jọjia aha ya bụ Shevardnadze katọrọ ihe a na-eme ụmụnna anyị, ma e nwekwanụghị ezigbo ihe ha mere iji kwụsị ya. Nke kadị njọ bụ na ọ na-abụkarị mgbe ihe mecharala ka ị ga-ahụ ndị uwe ojii.
Mgbe ihe ndị a nọ na-eme, otu onye omeiwu na Jọjia aha ya bụ Guram Sharadze malitere ịgwa ọhaneze ihe ndị na-abụghị eziokwu gbasara Ndịàmà Jehova. O kwuru na Ndịàmà Jehova bụ ndị ọjọọ. Ọ bịara dị ka ‘oge dị mma’ iji kwusaa ozi ọma agaala.
Ihe Nzukọ Jehova Mere Maka Nsogbu Ahụ
Nzukọ Jehova mere ihe ozugbo iji nyere ụmụnna nọ na Jọjia aka. A gwara ụmụnna anyị ihe ndị ha ga-eme ma a wakpowa ha. E chetaara ha ihe mere e ji akpagbu ezigbo Ndị Kraịst mgbe ụfọdụ.​—⁠2 Tim. 3:⁠12.
Ihe ọzọ nzukọ Jehova mere bụ na ha gbara akwụkwọ n’ụlọikpe ka e leba ihe a na-eme ụmụnna anyị anya. Otu nwanna na-eje ozi na Ngalaba Na-ahụ Maka Okwu Iwu n’alaka ụlọ ọrụ Jọjia kwuru, sị: “N’afọ anọ ahụ a kpagburu ụmụnna anyị, anyị degaara òtù dị iche iche na ndị ọchịchị akwụkwọ karịrị narị asatọ iji mee mkpesa maka ihe Vasili Mkalavishvili na ndị òtù ya na-eme ụmụnna anyị. Anyị gwakwara ndị ọnụ na-eru n’okwu na gọọmenti nakwa òtù ndị na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ ka ha nyere anyị aka. Ụmụnna na-ahazi ọrụ Ndịàmà Jehova n’isi ụlọ ọrụ anyị mekwara ka ọhaneze mara ọnụ a a na-emekpọ ụmụnna anyị na Jọjia, ma ihe a niile emeghị ka nsogbu ahụ kwụsị.” *
^ para. 30 Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu otú anyị si gbaa mbọ n’ụlọikpe ka e kwe anyị na-eme ihe ndị ruuru anyị, gụọ Teta! (Bekee) January 22, 2002, peeji nke 18-24.
1998-⁠2006 Otú Jehova Si Gọzie Anyị ‘n’Oge Dị Mma na n’Oge Nsogbu.’​—⁠2 Tim. 4:⁠2.